အပတ်များကကိုယ်ဝန်လက္ခဏာများ, ကိုယ်ဝန် Calculator ကို, ဗွီဒီယိုများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်2သီတင်းပါတ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင် 8 သီတင်းပါတ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင် 12 သီတင်းပါတ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင် 16 သီတင်းပါတ်
ကိုယ်ဝန် Calculator ကို
မျိုးဥထွက် Calculator ကို
ကိုယ်ဝန် Calculator ကိုနှင့်ကိုယ်ဝန်ဗီဒီယိုများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဝမ်းလောကီသားတို့သည်အမှကြိုဆိုပါ၏! ကျနော်တို့ကအပြုံးနှင့်အတူကပဲသင်ကရက်သတ္တပတ်အားဖြင့်သင့်ကိုယ်ဝန်ပတ်အတွင်းဖို့အသုံးပြုရလိမ့်မယ်သောအရာများစွာကိုတဦးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်းပြောကြသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ဘဝအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းမေးခွန်းတွေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ပြည့်စုံပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်, သငျသညျအသီးအသီးအပတ်တွင်မျှော်လင့်သောအရာကိုသိရန်နှင့်ရက်သတ္တပတ်များကကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေအပတ်ကအကြောင်းကိုစပ်စုမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်ပါ။
သင့်ရဲ့ကြောင့်နေ့စွဲနှင့် ပတ်သက်. အံ့သြသူတို့အဘို့, ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုကမ်းလှမ်း ကြောင့်နေ့စွဲဖြင့်ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်ဂဏန်းတွက်စက်, အရာတွေအများကြီးကူညီပေးသည်။ ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကြောင့်နေ့စွဲတွက်ချက်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ညွှန်ကြားချက်ပေးပါ။ တပတ်ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုအသိပေးနေဖို့ရန်မကြာခဏပြန်စစ်ဆေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးနှင့်အမေးနှင့်တုံ့ပြန်မှုဖတ်ရှုဖို့တစ်ဦးကပုဒ်မသွားရောက်ကြည့်ရှု။ တပတ်ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ဝန်အပတ်အတွင်းကသင်၏အပေါ်ကွင်းဆက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုထားပါ။ သငျသညျပုံမှန်မဟုတ်သောပုံမှန်ဆိုင်းဘုတ်များ, ကြုံနေရပါသလား? အသစ်ရဲ့ကိုယ်ဝန်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအဘို့အမဆိုအကြောင်းမရှိ? ကျနော်တို့ဒေါက်တာရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ information ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကိုယ်ဝန်သည်သင်၏ဇာတ်စင်ကာလအတွင်းပုံမှန်များမှာရက်သတ္တပတ်အားဖြင့်သင့်ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေတပတ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သငျသညျအသီးအသီးအပတ်တွင်မျှော်လင့်သောအရာကိုသိသောအခါ, တစျဖနျ, ကပိုကောင်းတယ်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူစတင်ရက်သတ္တပတ်သတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်သီတင်းပတ်ပေး ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေရက်သတ္တပတ် 1။ ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေရက်သတ္တပတ်2အသုံးပြုပုံရက်သတ္တပတ်5အသုံးပြုပုံစသည်တို့ကိုဘာတွေလဲရက်သတ္တပတ်ကိုယ်ဝန်ဂဏန်းတွက်စက်အားဖြင့်တစ်ပါတ်ကဒီထူးခြားတဲ့အားဖြင့်သင်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သင့်ကလေးစောင့်ကြည့်ဖို့ပြက္ခဒိန်နှင့်အတူရှိတယ်
အပတ်က 1 -အပတ်က2-အပတ်က3– အပတ်က4-အပတ်က5– အပတ်က6– အပတ်က 7-အပတ်က 8 -အပတ်က9– အပတ်က 10 – အပတ်က 11 -အပတ်က 12 – အပတ်က 13 – အပတ်က 14 – အပတ်က 15 -အပတ်က 16 – အပတ်က 17 – အပတ်က 18 -အပတ်က 19 -အပတ်က 20 – အပတ်က 21 – အပတ်က 22 -အပတ်က 23 – အပတ်က 24 – အပတ်က 25 အပတ်က 26 -အပတ်က 27 – အပတ်က 28 – အပတ်က 29 – အပတ်က 30 – အပတ်က 31 -အပတ်က 32 – အပတ်က 33 – အပတ်က 34 – အပတ်က 35 -အပတ်က 36 – အပတ်က 37 - အပတ်က 38 – အပတ်က 39 – အပတ်က 40
ငါတို့သည်သက်ဆိုင်ရာပေးနိုငျဘယ်မှာ ကိုယ်ဝန်ဗီဒီယိုများ အဖြစ်ကောင်းစွာ။ ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ကျန်းမာရေး-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နှင့်အထက်ဗီဒီယိုလင့်ခ်ကဲ့သို့တပတ်ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ဝန်ပတ်အတွင်းကိုယ်ဝန်အကြံပေးချက်များနှင့် ပတ်သက်. အကြံဉာဏ်ပေးနေကြသည်။ သူတို့ကအားဖြင့်သင်တို့မှနှုတ်ဆောင်နေကြတယ် စားသုံးသူကနျြးမာရေး Digest မဂ္ဂဇင်း။ ကျနော်တို့သော်လည်းတိုးချဲ့နေကြပြီး, နောက်ထပ်အောက်ကစာမျက်နှာကိုဆင်းဗီဒီယိုကလေးများအတွက်စျေးဝယ်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလေးများအတွက်စျေးဝယ်, ဆုကြေးဇူးကို registry ကိုပင်ကလေးရေချိုးခန်းစိတ်ကူးများနှင့် ပတ်သက်. မှန်မှန်ပို့စ်များကိုဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဝန်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များလိုအပ်အခြားက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သနည်း ကျနော်တို့ဒါစဉ်းစား! တဦးတည်းအဘို့, ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်ဂဏန်းတွက်စက်ကိုသင့်မှုကြောင့်နေ့စွဲတွက်ချက်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းဤအချက်မှာအချို့ကနဦးမေးခွန်းများကိုရှိသည်: ရက်သတ္တပတ်များကလူအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေရက်သတ္တပတ်ကဘာတွေလဲ? အချို့သောစောစောစီးစီးဘာတွေလဲ ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာသတိပေး? အဘယ်သို့ငါကိုယ်ဝန်ဆောင်ပေါ့လျှင်ငါသိ, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဝန်တိကျစမ်းသပ်မှု, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုရွေးချယ်ဖို့နှင့်သားဖွားဆရာဝန်ဖြစ်ကြပါဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်းသင် STDs နှင့်ကိုယ်ဝန်အပေါ်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်လေ့ကျင့်ခန်း။ တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်စင်စဉ်အတွင်းရက်သတ္တပတ်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောသုံးလပတ်နှင့်ကိုယ်ဝန်ရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်ဂဏန်းတွက်စက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်အခြားသတင်းအချက်အလက်များမှတဆင့်စသည်တို့ကိုရင်သားနို့တိုက်ကျွေးရေး, ကလေးနို့မှုန့်အကြောင်းအံ့သြနေတာ, အပတ်များကကိုယ်ဝန်ကျနော်တို့ဒီမေးခွန်းတွေကိုနှင့်များစွာသောပိုပြီးဖြေဆိုရန်ရည်ရွယ်ထား! ကျွန်တော်တို့သည်တပတ်ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ဝန်ပတ်အတွင်း, တစ်ဦး linear အတွက်သုံးလပတ်မှသုံးလပတ်အချိန်ကိုအခြေခံပြီးဖက်ရှင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ကိုဖုံးလွှမ်း။ ကျနော်တို့တောင်မှသင်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်ရမတိုင်မီအမှုအရာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်, သတင်းအချက်အလက်နှင့်အကြံပေးချက်ကို pre-ကိုယ်ဝန်နှင့်အတူရှေ့သင်တက်ကိုဖုံးလွှမ်း။ ကျနော်တို့ဖြန့်ဝေဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ယနေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျကျန်းမာကလေးပြုစုပျိုးထောင်, တဦးတည်းခြေလှမ်းထပ်မံသွားပါ။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူကြောင့်ရက်စွဲအားဖြင့်ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်ဂဏန်းတွက်စက်တိကျသတင်းအချက်အလက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သင်ကသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးကာလနေ့စွဲအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းရက်စွဲခြင်းဖြင့်ရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပင်ရက်သတ္တပတ်အားဖြင့်သင့်ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေတွက်ချက်ဖို့ပိုပြီးအဆင့်မြင့်နည်းစနစ်များရှိပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်တော်ကလေးများအတွက်စျေးဝယ်, ဆုကြေးဇူးကို registry ကိုပင်ကလေးရေချိုးခန်းစိတ်ကူးများနှင့် ပတ်သက်. မှန်မှန်ပို့စ်များကိုဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်။ ဆက်ပြီးနားထောင်ပါ! အဘယ်အရာကိုမျှကိုယ်ဝန်၏အံ့ဖွယ်အများနှင့်မှော်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းပါပဲ။ ဒီအတွေ့အကြုံအတွက်ရှေ့ဆက်စီစဉ်သင်နှင့်ကလေးများအတွက်ကောင်းစွာလုပ်နေတာသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာခွဲခြားသတ်မှတ်သို့မဟုတ်ပင်အချို့ကိုယ်ဝန်ရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာဖို့ကူညီနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့သင့်ရဲ့ကလေးငယ်ကို၏ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု, ဒါပေမယ့်လည်းရက်သတ္တပတ်များကရက်သတ္တပတ်သင်ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ တပတ်ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ဝန်တစ်ပတ်ရှေ့ဆက်စီစဉ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်အာမခံထားသင်နှင့်သင့်ကလေးကောင်းသောအရာနှင့်ထိတွေ့နေကြနှင့်သင့်ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သောအရာတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ အချိန်ကိုအားဖြင့်အမျိုးသမီးအများစုသူတို့ကိုယ်ဝန်သို့နှစျဦးမှလများဖြစ်ကြသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နားလည်သဘောပေါက်။ သူတို့ဆရာဝန်မြင်အချိန်အားဖြင့်, သူတို့တစ်လျှောက်တွင်နှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးလဖြစ်ကြသည်။ ရက်သတ္တပတ်များကကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေခြေရာခံသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ကလေးက၎င်း၏အဓိကကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုစနစ်များဖြစ်ပေါ်လာသောအခါဤကြောင့်ကိုယ်ဝန်၏ပထမဦးဆုံး 12 ရက်သတ္တပတ်အလွန်အရေးကြီးလှသည်။ အတော်များများကအရေးကြီးသောအရာများကိုသင်သည်သင်၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်နားလည်သဘောပေါက်မတိုင်မီဖြစ်ပျက်သို့မဟုတ်သင့်ဆရာဝန်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်အဘို့အပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာဖြစ်ခြင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုကိုဆိုလိုသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ဝန်သင်တန်းကာလအတွင်းအဓိကအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဝန်မတိုင်မီကောင်းသောယေဘုယျကျန်းမာရေးထားရှိခြင်းသည်ကိုသင်ကိုယ်ဝန်, အလုပ်သမားများနှင့်ဖြန့်ဝေ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာမွေးကင်းစကလေးငယ်ကိုဂရုစိုက်ပြင်ဆင်ကူညီပေးပါမည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အပတ်တွင်အားဖြင့်သင့်ကိုယ်ဝန်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်ဂဏန်းတွက်စက်နှင့်ဆက်စပ်ဘလော့ဂ်သတင်းအချက်အလက်များမှတဆင့်, သင်အပြည့်အဝပြင်ဆင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အထက်ညာဖက်အပေါ်အညွှန်းကို အသုံးပြု. ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ထွက်စစ်ဆေးပါ။ ဒါ့အပြင်, တပတ်ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်နှင့်အတူမှတ်ချက်ပေးရန်အခမဲ့ခံစားရလက္ခဏာတွေ, အတွေ့အကြုံများ, etc မကြာမီပြန်လာကျေးဇူးပြုပြီး!
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Category ေရြးပါ ကိုယ်ဝန်ဆောင် 12 သီတင်းပါတ် 16 ရက်သတ္တပတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်လက္ခဏာများ ကိုယ်ဝန်ဆောင် 18 သီတင်းပါတ်2ရက်သတ္တပတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်လက္ခဏာများ 8 ရက်သတ္တပတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်လက္ခဏာများ ကိုယ်ဝန်အတွက်သွေးထွက် ကိုယ်ဝန်၏အစောပိုင်းလက္ခဏာများ ကျန်းမာတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင် အံကိုယ်ဝန်ဆောင် နံနက်ဖြားနာ ကိုယ်ဝန် ကိုယ်ဝန် discharge ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာများ အပတ်များကကိုယ်ဝန်ဗီဒီယိုများအပတ် တုဗလကိုယ်ဝန်ဆောင်
ကျနော်တို့ဆရာဝန်များမဟုတ်ကြနှင့်ဤ website တွင်သတင်းအချက်အလက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုဖွဲ့စည်းမထားဘူး။ ကျနော်တို့တိကျသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလုပ်ပေမယ့်ကျွန်တော်အဘယ်သူမျှမအာမခံချက်ပါစေ။ ကျနော်တို့ကဆရာဝန်သို့မဟုတ် OBGYN ထံမှသမ္မာသတိရှိသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုရှာခြင်းငှါသင်တို့ကိုတိုက်တွန်းကြသည်။
အပတ်များကဘလော့ဂ်ကိုယ်ဝန်ထွက်ထွက်စစ်ဆေးနေများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆိုက်၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည် ရက်သတ္တပတ်များကကိုယ်ဝန်အပတ်က။ ကျနော်တို့ဖြန့်ဝေမှတဆင့်စောစောကိုယ်ဝန်နှင့်အတူစတင်ရက်သတ္တပတ်များကကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေရက်သတ္တပတ်များကိုပေးစွမ်းနှင့်ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်များ။
မူပိုင်ခွင့်© All rights reserved ။ မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ငါတို့သည်ဤ website တွင်ဆရာဝန်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုဖွဲ့စည်းမထားဘူး။ ကျနော်တို့တိကျသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလုပ်ပေမယ့်ကျွန်တော်အဘယ်သူမျှမအာမခံချက်ပါစေ။ ကျနော်တို့ကဆရာဝန်သို့မဟုတ် OBGYN ထံမှသမ္မာသတိရှိသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုရှာခြင်းငှါသင်တို့ကိုတိုက်တွန်းကြသည်။